तीनपटकभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्न नपाउने , स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ ! – Puleso
तीनपटकभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्न नपाउने , स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ !
संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ । वर्षमा अधिकतम तीनपटकभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्न नपाउने गरी मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि’ तयार गरेको छ ।
कार्यविधिमा पटक–पटक गरी वर्षमा २१ दिन मात्र विदेशमा रहन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधि पास भइनसकेकाले अहिले केही महिनायता पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । सचिव दिनेश थपलियाले कार्यविधिलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर जनप्रतिनिधिको भ्रमणलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन खोजिएको बताए । विदेश जाने स्थानीय तहका पदाधिकारीको मन्त्री, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको मुख्यसचिव, सहसचिवस्तरका कर्मचारीको मन्त्रालयका मन्त्री र अन्य कर्मचारीको मन्त्रालयका सचिवबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । एक वर्षमा धेरैजसो पदाधिकारीले आफूखुसी निर्णय गरेर औपचारिकरअनौपचारिक भ्रमण गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले केन्द्रीकृत मानसिकताका हिसाबले अहिले पनि नीतिरनियम बनाउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने तर्क गरे । ‘स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन हामीसँग भएका ज्ञान, सिकाइ र उपलब्धिलाई विदेशमा बाँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा जायज छैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई बाँधेर स्थानीय सरकार बलियो र समृद्ध हुन सक्दैन । अब केन्द्रले नियम लाद्ने दिन गए ।’
कार्यविधिमा स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेबाहेक भ्रमण गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । ‘भ्रमण स्वीकृतिका लागि आयोजक संस्थारनिकायको औपचारिक आमन्त्रण वा कार्यक्रममा सहभागिताको औचित्यसहित प्रस्ताव र कार्यक्रमको विस्तृत विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रस्तावमा छ, ‘औचित्य पुष्टि हुन नसकेका भ्रमण प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकृत गर्दैन ।’
नियमअनुसार विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता र होटलबास खर्चसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरका मेयर र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले दैनिक २२५, उपमहानगरका मेयर र महानगरका उपमेयर तथा सहसचिवसरहका कर्मचारीले १७५, नगरपालिकाका मेयररउपमयेर र उपमहानगरका उपमेयर, जिसस उपप्रमुख, सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्षरउपाध्यक्ष र उपसचिवसरहका कर्मचारीले १५० अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता पाउने प्रस्ताव छ । स्थानीय तहका वडाअध्यक्ष र सदस्यहरू, राजपत्र अनंकित कर्मचारीले १२५ तथा सवारी चालक तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीले १०० डलर भत्ता पाउनेछन् ।
कार्यविधिमा जिसस प्रमुख र महानगरका प्रमुखलाई कूटनीतिक राहदानी दिन प्रस्ताव गरिएको छ । महानगर उपप्रमुख, उपमहानगर प्रमुख, नगर प्रमुख, जिसस उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षलाई भने विशेष राहदानी उपलब्ध गराइनेछ । विदेश भ्रमणका बेला जनप्रतिनिधिले यही राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।कान्तिपुर